XOG: Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha Somaliland oo Muqdisho ku sugan | Salaan Media
Home Wararka XOG: Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha Somaliland oo Muqdisho ku sugan
XOG: Wasiirkii hore Arrimaha Gudaha Somaliland oo Muqdisho ku sugan
Muqdisho (SM) Warar lagu kal soon yahay oo ay heshay Shabakadda Salaanmedia ayaa ku warramay in magaalada Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya uu ku sugan yahay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale Duur.
Ilo wareedyo aan xidhiidh la sameeyay Shabakadda Salaanmedia oo diiday in magacooda la soo xigto ayaa noo sheegay in Mr. Duur uu dhowr maalin uu joogay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in uu iminka la degan yahay guddoomiyaha maxkamadda sare ee Somalia, Ceydiid Ilka Xannaf.
Ilaa hadda ma cadda wax yaabaha uu ka soo doonay magaalada Muqdisho wasiirkii arrimaha gudaha Somaliland oo bishii horre xilkaas laga qaaday.
Siyaasiyiin ku sugan Hargeysa iyo Muqdisho ayaa noo sheegay in wax yaabaha sababta u ah in xilka la qaado Mr. Duur ay ahayd markii la ogaaday in uu xidhiidh la yeeshay kooxda DAM-JADIID oo uu ka tirsan yahay madaxweynaha Soomaaliya iyo Xarkada Al-Islaax.
Somaliland ayaa dhawaan in ay jiraan siyaasiiyin iyo dad xilal horrey uga soo qabtay Somaliland , waxaana arrintaas ay soo baxday markii la arkay Feysal Cali Waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID oo la fadhiya Hotel madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wasiiradda xukuumada.
Dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa dhawr jeer waxa ay ku kulmeen dalka Turkiga, waxaana labada dhinac la doonayaa siddii la isugu soo dhaweyn lahaa.
Wixii War ah ee kasoo kordha lasocoda qaybahayaga danbe Insha Allah.